खाना खाएपछि किन निद्रा लाग्छ? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
खाना खाएपछि किन निद्रा लाग्छ?
स्वास्थ्यखबर शनिबार, वैशाख १७, २०७९, १०:३५:००
खाना खाएको केही समयपछि धेरैले अल्छी तथा निद्रा लागेको महसुस गर्छन्। कतिपय त खाना खाएपछि सुत्छन् पनि। खाना खाएपछि सुत्तु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन। खाना खाएपछि सुत्ने व्यक्तिहरुलाई विभिन्न रोगले सताउने अध्ययनहरुले देखाएको छ। खाना खाएपछि निद्रा लाग्ने अवस्थालाई चिकित्सकिय भाषामा ‘पोस्टप्रान्डियल सोमनोलेन्स’ भनिन्छ। यसलाई फूड कोमा भनेर पनि चिनिन्छ।
खाना खाएपछि निद्रा लाग्ने समस्या अधिकांशमा बिहान तथा दिउसो खाना खाएपछि देखिन्छ। खाना खाएपछि उँघ्नु, थकान लाग्नु, अल्छि लाग्नु, इनर्जी लेभल कम हुनु, कुनै काममा केन्द्रित नहुनु जस्ता समस्या धेरैमा देखिन्छ।
यसरी निद्रा लाग्ने समस्या अर्थात फूड कोमाका बारेमा खासै अनुसन्धान भने भएको पाइँदैन। तर यसको कारणका बारेमा कैयौं सिद्धान्त चर्चामा ल्याइएका छन्। तीमध्ये केही कारण यस्ता छन्:
बढी खाना खाएका कारणः अधिकांश मानिसहरु धेरै खाना खाएपछि यस्तो समस्या आउने बताउँछन्। तर यो पनि ठोस कारण नभएको भन्दै धेरैले मानिरहेका छैनन्।
कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो र प्रोटिनको बढी मात्राका कारणः यी पोषकतत्वले निद्रा बढाउँछन्। उदाहरणका लागि कार्बोहाइड्रेटले रगतमा अमिनो एसिड ट्रिपटोफिनको मात्रा बढाउँछ, जसबाट स्लीप हार्मोन सेराटोनिनको मात्रा बढाउँछ। प्रोटिनयुक्त खानामा पनि ट्रिपटोफिन बढी हुन्छ। चिल्लोबाट कोलेसिस्टोकिनन हार्मोनको मात्रा बढ्छ। जसबाट निद्रा आएको अनुभव हुनसक्छ।
शरीरको प्राकृतिक रिदमः हाम्रो शरीरको घडी २४ घण्टाको हुन्छ। अनुसन्धानका अनुसार राति सुत्ने चरणका साथै दिउँसो पनि सुत्ने एक चरण हुन्छ। अपरान्ह २ देखि ४ बजेको बीचमा यो चरण हुन्छ, तर निद्रा लाग्दा मानिसको कार्यप्रणालीमै असर पर्न सक्छ।
बढी खाना खानबाट बँच्नुपर्छ। डाइटमा सबै पोषकतत्व सामेल गर्नुपर्छ। अस्वस्थकर खानाका कारण फुड कोमा सिर्जना हुनसक्छ।
बिहान शारीरिक अभ्यास गर्न आवश्यक छ। शरीरलाई सक्रिय राख्दा यस्ता धेरै समस्या हल हुन्छन्।